Linux Mint 19.1 'Tessa' ichave ichisvika ino Kisimusi | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Clement akasara (Musiki uye Chikwata Chevatungamiriri veLinux Mint) Ndinoita chiziviso pane yepamutemo Linux Mint blog, uyen inozivisa vashandisi zvekugovera kuti inotevera vhezheni yeLinux Mint 19.1 inofanira kunge yakagadzirira pamberi peKisimusi.
Zvinoenderana neshumo remwedzi weprojekti, kuburitswa kutsva uku kuri kuuya kupera kwegore Ichasvika nemamiriro akasiyana edesktop ayo ayo anotsigira ayo ari Cinnamon, Xfce uye Mate.
1 Nhau huru dzeLinux Mint 19.1 'Tessa'
2 Zvimiro zvekuverengerwa muLinux Mint 19.1 'Tessa'
Nhau huru dzeLinux Mint 19.1 'Tessa'
Nezve iyo Cinnamon desktop nharaunda, mune iyi nyowani yekuburitsa Cinnamon vhezheni 4.0 iri kutambirwa.
Nzvimbo yedesktop inofanira kutaridzika sezvazvino mushanduro itsvaanonyora Mint mugadziri Clement Lefevbre mune rake repamwedzi mushumo.
Vagadziri vagadzirisazve iyo pani, iyo yakagamuchira dhizaini nyowani.
Maviri echitatu-bato maapplet, «Icing Task Manager» uye «CobiWindowList», ichabatanidzwa uye ivo vanoenderana nechitarisiko chitsva. "Icing Task Manager" ichatsiva echinyakare runyorwa rwe windows uye mapaneru mapaneru muCinnamon's default paneli.
Vashandisi vachave nesarudzo yekutsanangura imwe saizi yemifananidzo kune yega yega yenzvimbo nhatu dzepaneru.
Nzvimbo yega yega yepaneru inogona kuve ne16, 22, 24, 32, 48 kana 64 pikicha icon kana inogona kuyerwa kuti ikwane zvakakwana saizi yepaneru kana zvakakwana.
Chimwe chinhu chitsva icho chinozoverengerwa muLinux Mint 19.1 zvakare iri Mint-Y theme iyo inotsiva Mint-X semusoro wetsiyo.
Zvichienderana neruzivo rwuripo parizvino, musiyano wedingindira uchasimudzirwa kuti zviratidzike zvioneke sezvakareruka, uye zvinyorwa nemifananidzo zvicharatidzika kuva nerima kupfuura nakare, nokudaro zvichisimudzira musiyano neshure.
Kunyangwe ese mavhezheni epurojekiti akasangana nematambudziko panguva imwe chete, Clem akavimbisa kuti shanduro yeCinnamon, MATE neXfce ichaburitswa panguva imwe chete.
Zvimiro zvekuverengerwa muLinux Mint 19.1 'Tessa'
Mune ino denderedzwa yekuvandudzwa ichave yakagadzirirwa neazvino Cinnamon 4.0 desktop nharaunda, iyo Mint-Y-Rima theme inogoneswa nekutadza, uyeIyo default windows pane yakagadziridzwa zvakare, vashandisi vanogona zvakare kudzokera kune echinyakare interface kuburikidza nesarudzo.
Iyo yakazara mapaneru inoshandisa yakakura 40 pixel pani, uye ma icon ari kuruboshwe nepakati nzvimbo achawedzerwa, asi iwo mairi mune kurudyi systray acharamba ari makumi maviri nemapikiseli.
Iyo nyowani nyowani inosanganisira yekumisikidza hwindo uye diki system tireyi.
Pa peji rekutambira, vashandisi vanogona kusarudza yavo yavanoda interface, uye gare gare inogona zvakare kuchinjwa kuburikidza nemaitiro.
MuLinux Mint 19 iyo mamiriro emifananidzo aive monochrome. Kunyangwe izvi zvidhori zvichitaridzika zvakanaka pane mapaneru erima, hazvina kushanda mushe pamamenu machena echinyorwa kana muzviitiko apo mushandisi akachinja iyo yekumashure ruvara rwepaneru.
Kugadzirisa iyi nyaya, Linux Mint 19.1 ichapihwa yekufananidzira icon rutsigiro rweRedshift, mate-vhoriyamu-kutonga-applet, paboard, uye network-maneja-applet.
Stephen Collins akawedzera icon yekunhonga kune raibhurari yeXApp.
Iyo yekunhonga icon inopa dialog bhokisi uye bhatani uye ichaita kuti zvive nyore kune edu maapplication kusarudza theme icon uye / kana icon nzira.
Uyewo, Mint vagadziri vatangisa yepamutemo Patreon account senzira nyowani yekuwana mari kubva kune vashandisi.
Zvinotonyanya kukosha, pane kumwe kuvandudzwa kukuru kuCinnamon desktop nharaunda.
«Kutevera zvikumbiro zvakawanda zvatakatambira kuti tiwane imwe nzira yePaypal, tinofara kuzivisa kuti Linux Mint yavepo Patreon .
Chirongwa chedu chakagamuchira zvipikirwa makumi matatu nesere kusvika zvino uye takafunga kushandisa sevhisi iyi kubatsira kutsigira Timeshift, chirongwa chakakosha kwazvo kwatiri uye chinowedzera kukosha kuLinux Mint, "anodaro Clement Lefebvre.
Iyo Linux Mint chirongwa chakavakirwa pamipiro uye chakaratidza chimwe chinhu chitsva mune izvi. Nechikumbiro chakakurumbira, imwezve sevhisi yekubhadhara yakaunzwa padivi pePaypal uye ikozvino vanopa vanogona kuiwana kuburikidza nebasa rePatreon. Clement Lefevbre anonyora kuti angangoita zviuru gumi zvemadhora zvakapihwa munaGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint 19.1 'Tessa' iri kuuya ino Kisimusi
Query ini ndiri kushandisa ubuntu 18.10 uye ini ndinowana izvo
https://ibb.co/nv91a0 chero mhinduro?
Chokutanga pane zvose ndinokutendai zvikuru! Linux ndiyo yakanakisa. Ini ndinongowana kushayikwa kumwechete kana kusiiwa. Ndine mapurinda maviri eEpson andinoshandisa mubasa rangu, iyo ecotank mhando, multifunction. Ini handikwanise kuzvishandisa, zvese kupurinda uye kuongorora. Epson akandipindura kuti havagone kugadzirisa dambudziko (ndinofungidzira havadi) pane mukana here wekuti 19.1 itsva igadzirise dambudziko iri? Iwe unoziva chero mhinduro? ndatotenda kare.
GNU Linux-yakasununguka Kernel 4.19 iri pano kune vashandisi vanoda kuve 100% yemahara